Mozambique: Dadaalada ayaa wali socda sidii dadka rayidka ah looga badbaadin lahaa Palma | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Mozambique: Dadaalada ayaa wali socda sidii dadka rayidka ah looga badbaadin lahaa...
Mozambique: Dadaalada ayaa wali socda sidii dadka rayidka ah looga badbaadin lahaa Palma
Qandaraaslaha amniga ayaa sheegaya in meydadka jiifa waddooyinka magaalada xeebta ah, xaaladdu wali qasan tahay ka dib weerar fallaagow.
Hay’adaha bani’aadamnimada ayaa sheegaya in xaaladdu ay si daran uga sii dartay 12-kii bilood ee la soo dhaafay iyada oo ay sii kordhayaan weerarada ka dhacaya tuulooyinka
Dadaalo lagu doonayo in lagu soo daad gureeyo dadka ku xayiran ka dib weerar ay ku qaadeen dagaalyahanada falaagada magaalada Palma, Mozambique, ayaa wali socda inkastoo xaalada kacsan tahay.
Dagaalyahanada fallaagada ayaa weeraray magaalada Palma ee gobolka Cabo Delgado oo u dhow xadka ay la wadaagaan Tansaaniya Arbacadii, halkaas oo ay ku dileen tobanaan qof ayna ku dhaawaceen tiro kale. Dhowr qof ayaa ilaa hadda la ogeyn meel ay jaan iyo cirib dhigeen.
Yey yihiin dagaalyahanada weerarada ka bilaaba waqooyiga Mozambique?
Daraasiin dad rayid ah oo ‘aan difaac lahayn’ ayaa lagu dilay weerarkii Mozambique
Mozambique: Kumanaan ka cararaya doonyo ay go’doomiyeen Palma
“Waxaan badbaadinay 120 qof oo carartay oo ku dhuumaaleysanayay xerooyinka,” Lionel Dyck, oo ah agaasimaha guud ee Dyck Advisory Group, oo qandaraas lagu siiyay inuu ka caawiyo dowladda Mozambique iyo shirkadaha gaaska dagaalka ay kula jiraan mucaaradka, ayaa u sheegay idaacadda South Africa ee SABC.
Dyck wuxuu sheegay in kooxdiisu ay sidoo kale ku guuleysatay inay galbiso dad badan, oo aan raaci karin helikabtarradooda, meelaha amaanka.
“Waxaa jira meydad fara badan oo daadsan waddooyinka, qaarkoodna madaxa ayaa laga jaray. Hadda ma tiriyeyno meydadka laakiin waxaan diiradda saareynaa kuwa nool, ”ayuu yiri, isagoo intaa ku daray in xaaladda aagga ay wali tahay mid qasan.
Omar Saranga, oo ah afhayeenka ciidamada difaaca iyo amniga ee Mozambique, ayaa bayaan uu soo saaray axadii ku xaqiijiyay in tobanaan qof oo ay ku jiraan dadka deegaanka iyo ajaanib la dilay.
Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in “daraasiin dad ah oo aan difaac lahayn” lagu dilay weerarka isku dubaridka ah ee u arkay kuwii soo weeraray inay si aan kala sooc lahayn rasaas ugu ridayaan dadka iyo dhismooyinka magaalada xeebta leh.
Dhibbanayaasha waxaa ka mid ah toddobo qof oo lagu qabtay weerar gaadmo ah intii lagu jiray hawlgal looga soo daad gureynayay hudheel ay u carareen si ay uga badbaadaan weerarkii Arbacadii.
Kooxda hubaysan, oo gudaha looga yaqaan Al-Shabaab laakiin aan wax xiriir ah la lahayn kooxda fallaagada ah ee Soomaaliya, waxay dhibaato ka geysteen waqooyiga Mozambique tan iyo dabayaaqadii 2017, halkaas oo ay ku dileen boqollaal, ay ku barakaceen beelihii iyo magaalooyin ay qabsadeen
Waxay awood u yeelatay inay ka faa’iideysato saboolnimada ba’an iyo shaqo la’aanta ka jirta aagga si ay u qorto tiro badan.
Dyck wuxuu sheegay in dagaalyahannadu ay markii hore ahaayeen koox “burcad ah” ilaa ay ka sheeganayeen ku biirista ISIL (ISIS) tan iyo markaasna ay noqdeen khatar weyn.
“Kani wuxuu ahaa weerar aad loo soo agaasimay oo abaabulan,” ayuu yiri askariga howlgabka ah, isagoo intaa ku daray in kooxdu ay xitaa heysato hub culus hada.
Isniintii, safiirka Koonfur Afrika ee Mozambique wuxuu sheegay in dalkiisu wadahadal la galayo Ururka Horumarinta Koonfurta Afrika (SADC), oo ah xayndaabka gobolka ee 15 dal, si loo raadiyo xalka lagu joojinayo rabshadaha ka socda Mozambique.
Wuxuu sheegay in dad badan oo South Afrikaan ah oo ka shaqeynayay Palma hada loo raray Pemba, oo ah magaalo u dhow, qaarna ay u gudbeen dhanka Tanzania.
Isniintii, diyaarad yar oo Qaramada Midoobay ah oo siday dad waaweyn iyo carruur – oo uu ku jiro ilmo yar oo hal sano jir ah oo dhaawacmay – ayaa soo gaadhay garoonka diyaaradaha ee Pemba.
Sida ay ku warantay wakaalada wararka ee Lusa, rasaas ayaa ku dhacday lugaha canuga intii uu ku jiray gacanta hooyadiis markii ay ka cararayeen fallaagada.
Qof badbaaday, Nelson Matola, wuxuu ku tilmaamay waxa ka dhacay magaalada “xasuuq”. Matola wuxuu sheegay in qaarkood isku dayeen inay ku baxsadaan kolonyo ay la socdeen 17 gaari maalintii jimcaha.
“Waxaan tagnay Amarula [Hotel Amarula] halkaas oo aan joognay labo ama saddex maalmood. Magaalada Amarula, waxaa nagu hareeraysnaa Al-Shabab, afar maalmood kadib oo aan wax cunin, waxaan go’aansanay inaan ka tagno oo aan aadno howdka oo aan ka baxno. Qaar ka mid ah asxaabta ayaa naftooda ku waayey, ”ayey tiri Matola.
Palma waxay udub dhexaad u tahay maalgashi balaayiin doolar ah oo ay sameysay shirkada Total, ee fadhigeedu yahay dalka France saliida iyo gaaska, si ay uga soo saarto gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah meelihii ay ka yimaadeen xeebaha badweynta Hindiya.
Kaydka gaaska waxaa lagu qiyaasaa inuu ka mid yahay kuwa adduunka ugu weyn maalgashiga ay sameysay Total iyo kuwa kale ayaa lagu soo waramayaa inuu yahay $ 20bn, oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn Afrika.
XIGASHO: WAKAALADAHA WARKA
Previous articleWali shirka Shanta maamul Goboleyd oo is jiid ku jira
Next articleDalka Soomaliya oo la sheegay qatar in ay ku soo wajahantahay
Gaashaanle Diini Rooble Ahmed oo ah afhayeen Ciidamada badbaado Qaran...
Gaashaanle Diini Rooble Ahmed oo ah afhayeenka ciidamada dowladda ee la baxay Badbaado Qarann. Ayaa ka hadlay xaalada Muqdisho iyo Ciidamadii shalay laga qaaday...
Waxaa saacado kadib Magaalada D.C lagu wadaa in lagu caleema-saaro madaxweynaha...